OPPO Reno Z: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
E gosipụtara OPPO Reno dị ka ọnwa Eprel gara aga. Chinesedị ndị China gosipụtara ezinụlọ ọhụrụ nke ekwentị, nke dị ugbu a ahapụlarị anyị ụdị abụọ. Ekwentị na-enye ọtụtụ aha ya na ya njedebe dị elu na 5G. Ngwaọrụ abụọ nke ụlọ ọrụ amalitela na Europe. Ugbu a, ha ahapụlarị anyị na ekwentị nke atọ na mpaghara a: The OPPO Reno Z.
E gosipụtara OPPO Reno Z ugbu a na ọkwa eze. Onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama na China, akpọrọ mezue ezinaụlọ a nke akara igwe. N'ihe metụtara imewe, ọ dị iche na ụdị ndị ọzọ ekele maka ihuenyo ya na ọkwa dị ka ụdị mmiri mmiri.
The Chinese ika doo anyị na a dị iche iche nlereanya si aga abụọ. Oge ụfọdụ gara aga, ekpughere na ụlọ ọrụ ahụ nwere debara aha ekwentị ise na mpaghara a na Europe, ya mere amụma ndị a na-emezu. N'okwu a, anyị na-ahụ ekwentị dị oke ọnụ maka akụkụ ya.
1 Nkọwa OPPO Reno Z
Nkọwa OPPO Reno Z
Na teknuzu ọkwa ọ dị ka ezigbo ihe nlere di na etiti di elu na gam akporo. Ọ bụ ezie na nke a OPPO Reno Z nwere ọtụtụ ihe anyị hụrụla na ngwaọrụ ndị ọzọ n'ime mpaghara ahịa a. Mana n'ozuzu ọ na-ekwe nkwa inye anyị ezigbo arụmọrụ n'oge niile, nke bụ ihe dị mkpa. Ndị a bụ nkọwa ekwentị:
Ihuenyo: 6.4-inch AMOLED nwere mkpebi FHD + (2340 × 1080) na 19,5: 9 ruru
Rear igwefoto: 48MP + 5MP
Igwefoto n'ihu: 32MP na oghere f / 2.0
Batrị: 3.950 mAh na ngwa ngwa nke 20W (5V / 4A) VOOC 3.0 ụgwọ ọkụ
Usoro njikwa: Akara 9.0 Android na ColorOS 6.0 dị ka akwa mkpuchi
Njikọ: 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3.5mm jack jack, na USB Type-C:
ndị ọzọ: On ihuenyo ihuenyo mkpisiaka mmetụta, ihu unlock kpọghee ekwt
Akụkụ: 157.3 × 74.9 × 9.1 mm
Ekwentị ahụ na-anọchite nloghachi nke akara ndị China na ụdị ihe a na-ahụkarị taa. Ya gara aga ụdị a nso ga-ahapụ anyị na a na-akpali n'ihu igwefoto na ya eji usoro. Ma na nke a OPPO Reno Z ha nzọ na ihe ndị ọzọ ot. Dịka ị pụrụ ịhụ, ngwaọrụ ahụ bụ kpochapụwo na etiti etiti a. Karịsịa n'ihi na ọ na-eji Snapdragon 710 dị ka ihe nhazi ya, ihe nhazi ahụ kacha mma na mpaghara ahịa a.
Igwefoto bụ ebe siri ike na ngwaọrụ. Ọ na-eji igwefoto azụ abụọ nke 48 + 5. Mgbe anyị nọ n’ihu, anyị nwere 32 MP. Igwefoto niile nke OPPO Reno Z a kwadoro site na ọgụgụ isi, nke na-enyere aka n'ịchọpụta ihe nkiri, na mgbakwunye na ịnwe ụdị foto foto ọzọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka wuru na ihuenyo, ihe ohuru di nkpa, n'ihi na rue ugbua obu ihe anyi huru na njedebe di elu na gam akporo. Anyị nwekwara ihu mkpọghe dị na ekwentị. Batrị ekwentị nwere ikike nke 3.950 mAh, nke ga-enye nnwere onwe dị mma n'oge niile.
N'oge a enweghi ozi ọ bụla banyere mwepụta nke a OPPO Reno Z na ahịa. E gosipụtara ngwaọrụ ahụ, mana amabeghị mgbe a ga-ebupụta ya n'ụlọ ahịa, ma na Europe ma na China. Anyị kwesịrị ịnwekwu ozi na ya obere oge, mana ụlọ ọrụ ahụ ekwubeghị ihe ọ bụla ruo ugbu a.
A ga-ere ya ire n'ọnụ ahịa euro 190. Ọ bụ ezie na ọ bụ obi abụọ ma ọ bụrụ na nke a ga-abụ ọnụahịa ya na Spen. Ọ bụrụ otu a, ọ ga - abụ ụdị dị ọnụ ala karịa n'ụdị ya, nke nwere ike inyere aka ewu ewu ọtụtụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-abụrịrị ọnụ karịa mgbe ị rutere Spain. Anyị na-eche nkwenye nke mbinye aka.
Banyere agba, agba abụọ ekwuru ugbu a: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (Ocean Green) na nwa (Jet Black). Ọ bụ ezie na na foto anyị nwere ike ịhụ ụda a n'etiti acha odo odo na acha anụnụ anụnụ. Anyị nwere olile anya ịmara ma agba a ga - ewepụta maka OPPO Reno Z.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OPPO Reno Z: Akara ohuru ohuru
Etu ị ga - esi amata ngwa ndị a kacha eji eme ihe na gam akporo